विकास, नारायण गोपाल ,आर्किमिडिज र प्रिय साथी किर्तिपुरमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी पछाडि अवस्थित एउटा घरको एउटा कोठामा मधुर गीत बज्दै छ । संगीत कोठाको भित्ता भित्तामा ठोक्किएर गुन्जिदै छ । संगितको ध्वनी केही लिक पनि भइरहेको छ झ्यालबाट बाहिर । एउटा भौतिकशास्त्रको विद्यार्थी बुझन प्रयासरत छ भौतिकशास्त्रका सिद्धान्त । शब्दहरुमा जिवन्तता देख्न थालेको छ उसले । पहिले पहिले शब्दहरुमा ध्यान जान्थेन । केबल संगीतमा मात्र रमाउने काम हुन्थ्यो विकासको । आज नारायण गोपालको गीतले बिकासको मन सुम्सुम्याउँदै छ । “एउटा मान्छेको मायाले ......” कोठामा एउटा खाट ,एउटा टेबुल ,एउटा कुर्सी ,एउटा ह्याङर ,एउटा झ्याल छ । उसको जीवनमा “एउटाको “ महत्व धेरै छ । जिवन पनि एउटै हो । पुनर्जन्ममा विश्वाश नगर्ने भौतिकवादी न हो रमेश । उसको हात भने बेलाबेलामा मोबाइलमा गैरहन्छ । उसको मोबाइल पनि एउटै छ । उसको मनप्रिय साथी पनि एउटै छ । उनको मेसेज आउँछ कि भन्ने प्रतिक्षामा छ । आज उसलाई पढ्ने मन त छैन। तर नपढी नहुने छ । पाना पल्टाउँदा ” आर्किमिडिजको सिद्धान्तमा “ आँखा पर्छ । खाना खाएर बसेको भ
आइ. सि .यु बाहिर पाँच रुपैया केही मलिन अनुहारहरु एउटा अाइ सि यु कक्षबाहिर प्रतिक्षामा बसिरहेका छन् । स्वजन र आफन्तको प्रतिक्षामा । कहिले निको भएर पून: भेट्न् पाइन्छ कि भन्ने आशमा । बेला बेला माइकिङबाट आवाज आउछ ” फलानोको मान्छे संपर्क राख्नु “ । सबै जना सतर्क हुन्छन् । कान तिखा हुन्छ्न् केही क्षण । आफ्नो बिरामीको अप्डेटका लागि बोलाएको हो कि भनेर । भित्र जटिल रोगसँग लडिरहेका छन् ति सबै मलिन ब्यक्तिका जीवनका प्रिय आत्मीय पात्रहरु । कोही मृत्‍युसँग लडिरहेका छन् । कोही सुधारको क्रममा छन् । सबैका मनमा भय छ । स्वजन फर्केर लैजान पाइने हैन कि भनेर । आशा पनि छ सघन उपचारको । सबै बिरामीहरुको मुटुका गतिबिधी मनिटरमा प्रकाशित भएका हुन्छन् । ती मनिटरको कर्कश आवाज पनि सुनिन्छ । त्यो कर्कश आवाज बेड्मा सुतिरहेका बिरामीहरुको आर्तनाद जस्तो प्रतीत हुन्छ बेला बेला । त्यही प्रतिक्षारत ब्यक्तिहरुका माझमा एक अन्दाजी ६० बर्षका नमिलेको ढाका टोपी ,मैलो कमिज ,रङ उडेको पाइन्ट र पुरानो कोट लगाएका ब्रिद्ध छन् । चाउरी परेको अनुहारमा खोप्ल्टा परेका गाला छन् । दुब्लो ज्यान
दसैमा सेतो कोट घटस्थापनाको दिन । बिदाको दिन । रमाइलो दिन । दसैं प्रारम्भ हुँदाको तिथि । जमराले अस्तित्व पाउने दिन । खुशीको चाड । उमङको चाड । स्कुल पढ्दाका दिनहरु झल्झल्ती याद आउने कहिलेकसो अचेल ! तम्घासबाट एक दिनको बाटो हिंडेका दिनहरु स्‍मृतिमा अझै ताजा छन् । पहाड घर जाँदा सार्है रमाउने मन हुन्थ्यो । रौँदिको उकालो चढ्दा आसिनपसिन हुन्थ्यो । साँझमा घर पुगिन्थ्यो । समय सँगै बिस्तारै बिदा घट्दै गए । हेर्दा हेर्दै घटस्थापनाबाट सर्दै सर्दै सप्तमी कि अस्टमिमा घर जाने दिन आए । जती बिदा कटौती भए पनि देशको प्रगती त उस्तै होला !! समय बित्दै गए । रितुहरु फेरिदै गए । दसैंहरु आउँदै जाँदै गरे । दसैं त सधैं उस्तै त हो । शरद रितुमा सधैं आउँछ अनि जान्छ पूरा चहलपलसाथ । मेरो लागि न त यो चाड पर सर्छ न त अगाडि । न अरु कसैका लागि । परिवर्तन त केबल आफ्नो अवस्था र परिस्थितीमा हुने रहेछ । । बिदाका दिन कट्दै कट्दै अचेल शून्य भएको छ । पहिले पहिले छुट्टीमा घर गइन्थ्यो । अचेल छुट्टीमा घरबाट छुट्टी माग्नुपर्छ । ........ “ कहिलेको टिकेट लिइस् त बाबु । “ घरबाट